စနေလင်း| February 18, 2013 | Hits:8,640
မိုးမြင့်ကျော် February 18, 2013 - 8:27 pm မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါပါပဲ။
Reply MST February 18, 2013 - 8:44 pm ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကမရှိ၊ အများစုက အနည်းစုကုို ဖိနှိပ်၊ အနည်းစုက အခွင့်အရေးရရင် ပြန်ချေပ။ ငါတို့နုိုင်ငံတော့ တုိုးတက်ဦးမယ်။ လူ ၃၀၀ လောက်စုလုို့ရရင်ပဲ ရဲကနေပြန်တောင်းပန်ရတဲ့ အဖြစ်ရောက်နေပြီ။ တကယ်က ရပ်ကွက်က ကန့်ကွက်တယ်ဆုိုတာထက်မများကြီးပိုပါတယ်။ မင်းမဲ့စရုိုက်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလုို့ ရေးရမှာ။ ဒီလုိုနဲ့ ဥပဒေမဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာဦးမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ နွံနစ်နေတဲ့ ငါတုို့နုိုင်ငံပဲ နလန်မထူဖြစ်ဦးမှာပဲ။
Reply ချစ်သခင် February 18, 2013 - 8:49 pm မိုးမျှော်တိုက်ပဲဆောက်ဆောက် တတ်နိုင်ရင်ဆောက်ကြပေါ့။ ဗုဓဘာသာကြတော့ ဆူးလေ လမ်းလယ်ခေါင်မှာတောင် စေတီဘုရားအကြီးကြီးတည်လို့ရတယ်။ ကျန်ဘာသာတွေကို ဘာဖြစ်လို့ကန့်သတ် နေတာတုံး။ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်း ပေးကြပေတော့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးတာနှင့်အားလုံးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့များ ထင်နေကြသလား မသိဘူး။
Reply မဟာလူသား February 20, 2013 - 10:17 am သို့..ချစ်သခင်…။
Reply Sai Suriya February 21, 2013 - 1:27 pm It is true that Burma isacountry with majority Buddhist. It means we have to prove that we are more tolerance to all beings since we pray every morning that ” May all being well and happy” . By saying that we wish everyone happy no exceptional cases.
ReplyွှJustic February 18, 2013 - 10:48 pm ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ အကယ်ရှိသလား၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့အာဏာပိုင်အားလုံး အစ္စလာမ် ဘာသာ ကို စော်ကားတိုက်ခိုက် ရန်လိုနေတာကို ခွင်ြ့ပုထားသလို အရေးမယူတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ သတ္တိရှိရှိ အစ္စလာမ် လက်မခံပါ လို့ ကမ္ဘာကို ကြေညာလိုက်ပါလား။ လုပ်ရပ်က အဆင့်အတန်းကို ပြနေတယ်ဆိုတာ လူအားလုံးနားလည်ပေမဲ့၊ အရှက်သိက္ခာမရှိသူတွေ သိချင်မှသိကြမှာပါ။
Reply sai Suriya February 19, 2013 - 1:44 am It is difficult to understand the why people does not agree to encourage other religion to prosper. Where is the human right and freedom of religion? Totally crazy .
Reply true talker February 19, 2013 - 1:44 am That shows the inner mortal of the Racist’s propaganda among the people. Not other religion cannot pray? Is it good ?
Reply Fake pointer. February 20, 2013 - 10:38 am Who said other religions cannot pray? Are you able to count how many mosques exist in Myanmar?
Reply ml February 19, 2013 - 3:08 am အလုပ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ကြသင့်ပါတယ်။ စကားတောင်စားဥာဏ်နဲ့ မလိမ့်တပတ် မလုပ်ကြပါနဲ့။ လူနေဘို့ အဆောက်အဦးဆောက်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ရင် လူနေဘို့ပဲ ဆောက်ပါ။ အသေးစား ပြင်ဆင်ခွင့်တောင်းရင် တောင်းသလိုပဲ ပြင်ပါ။ လူနေဘို့ လျှောက်ပြီးမှ ကျောင်းအကြီးကြီး ချဲ့ဆောက်တာ (ပြင်တာ မဟုတ်) ဆိုရင် ဆောက်သူဘက်က လွန်ပါတယ်။
Reply aunglaystar February 19, 2013 - 5:17 pm ဓာတ်ပုံကြည့်ရတာတော့ ငါတို့အိမ်က နွားတင်းကုပ် လောက်တောင်မရှိပါဘူး သားရယ်
Reply Sunshine February 19, 2013 - 7:16 am Where is freedom of religion and religion of press then? The Muslims need to get permit to build it. If they have permit, they have the right to do so. In America, there are some Burmese Buddhist Monasteries. No one bothers them. I am notaMuslim but I love freedom of religion and freedom of press. Muslims who are Burmese citizens must have the same rights which the Burmese people do have.
Reply Brake! February 20, 2013 - 10:48 am Are you sure you are not muslim? You mean The Muslims only need to get permit to build their mosque? Other religions people no need to get permit.? Are you blind? Many
Reply Maung Thwe Thit February 21, 2013 - 11:20 am This is true. We all should understand that. Actually there has no religious in true religion.
Reply Yee Mon Thant February 19, 2013 - 3:36 pm ဒီမိုကရေစီနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဘာသာရေးလွပ်လပ်ခွင့်တဲ့လား။ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာစေတီတစ်ဆူဆောက်ခွင့်ရမှဒီစကားလာပြော။ဆူးလေဘုရားနားမှာဗလီဆောက်ခွင့်ပေးထားတာတောင်မကျေနပ်သေးဘူးလား။
Reply minko February 19, 2013 - 3:48 pm တိကျတဲ့ ဥပဒေတွေ မရှိလျင် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြဿနာကအမြဲဖြစ်နေမှာဘဲ-
Reply Sai Suriya February 19, 2013 - 5:22 pm Really cannot digest the idea of religious intolerance among burmese people. It is natural that mulims also want to develop their religion . At the same time , we live in the same country with different believe. Despite the differences we are the same countrymen. May all beings well and happy. Regardless of religion or races.
Reply water February 19, 2013 - 5:51 pm Really, they make the people around annoyed not only in our own country but also in the world around. Our Myanmar people are not racists but dislike extreme and poisonous people.
Reply June February 19, 2013 - 6:17 pm စဉ်းစားညာဏ်ရှိကြဖို့အချိန်တန်ပြီ။အရှည်ကိုကြည့်ကြပါ။အင်ဒိုနီရှား၊မလေးရှားOICတို့မှာဦးနှောက်နည်းသူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဝင်စွက်ဖက်ကြလိမ့်မယ်။မလုပ်စေ၊မဖြစ်စေချင်ယင်UN,EUရှိတယ်၊တိုင်ကြပါ။လက်ရှိအစိုးရကတော့ဥပဒေအထက်မှာရှိတယ်။နောက်ကွယ်ကလှုံှံဆော်သူရှိယင်ထုပ်ဖော်ကြပါ။နိုင်ငံတကာကရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့တာဆူနေကြပြီ။ကမာ့အလယ်မှာမလုံခြုံတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး၊ဆောက်တဲ့သူတွေလည်းရက်ကွက်ကိုပွင့်လင်းပြောပါ။လက်မခံယင်မလုပ်ပါနဲ့။လက်ခံလာတဲ့တစ်နေ့ထိစောင့်ပါ။တွေ.ဆုံညှိနှိင်းတဲ့အကျင့်မွေးကြည့်ပါ။ကိုယ်နဲ့မတူကိုယ့်ရန်သူဆိုတာအယင်နအဖနဲ့အတူသေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။
Reply bala February 21, 2013 - 2:33 pm အနှိုင်းမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာသတ္တဝါများအပေါ်ကြီးမားတဲ့၊
Reply တာတာ February 21, 2013 - 10:00 pm ကောင်းလိုက်တဲ့ကွန်မင့်ဗျာ။ ကြိုက်တယ်။
Reply Myobalamin February 22, 2013 - 6:40 pm ကိုတာရေ၊ရုပ်နာမ်၊အယတန၊ဓါတ်၊သစ္စာပါတဲ့၊ကိုရမ်ကျမ်းများ